ဂျီးဒေါ် Sheee | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဂျီးဒေါ် Sheee
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 19, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 11 comments
စားဂျကွဲ့စားဂျ.. စားပီးရင် ဖင်ဗူးတောင်းထောင်အောင် ကြောက်ကြဟဲ့ မိုးနတ်မင်းဂို… ။ ဂွီ… သူကျွေးတာဖြင့် ပဲလှော်နှင့်ရေ.. ပြီးဒေါ့ မချိမဆန့် ကြောက်ခိုင်းနေသည်…။ ကကြောင်ကြီး ပဲဂျီးလှော်တစေ့ ကောက်ဝါးရင်း မကျေမနပ် အတော်ဖြစ်သွားသည်။ ရေကလည်း သောက်ရေသန့်သာဆိုဒယ် ပက်ကင်ပိတ်မဟုတ်.. ပြန်ပိတ်ထားသော ဘုံဘိုင်ရေဗူးသာဖြစ်၏။ စဉ်းစဉ်းစားစားလဲလုပ်ပါ ဂျီးဒေါ်ရှီးရယ်.. သူကြတော့ စားလိုက်ထှာ ပုဇွန်ထုပ်ကြော်၊ ရေဘဝဲသုပ်၊ သင်္ဘောသီးထောင်း၊ ငါးကင်၊ ထမင်းကြော် စုံလို့။ ငါတို့ကြတော့ ဆန်ကွဲမှုန့်နဲ့ လမ်းဘေးအရွက်စုံ ကြိုထားတဲ့ တာလဗောဟင်း၊ ဟင်းပြောင်းဟင်းလွဲ လုပ်ပါဆို.. ဘဲဥဟင်းနဲ့ငါးပိထောင်း.. သေဟဲ့နန္ဒိယ.. ကားခက တထောင်၊ ဟင်းဖိုး တရာ.. ဒါတောင် ချက်ခ ငါးဆယ် ထည့်ပေါင်းထားလို့..
သများလက်မောင်းဂျီး အောင့်သွားဒယ်… ပုဇွန်ထုပ်ကြီး လှမ်းဆွဲရဒါ…
မတော်မတည့်မိုလို့ စေတနှာနဲ့ ဝေဖန်ဗျံဒေါ့ “အထင်မသေးနဲ့အူးလေးကြောင်.ဆန်မှုန့်တွေ မကပ်နေအောင် .လက်မောင်းပြုတ်မတ် မကျက်မချင်း မွှေပြီးချက်ပေးရတာပါ ” အဲလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမွှေတော်ဖြစ်ကြောင်းလဲ cat catလံ ရန်တွေ့ဒတ်သဗျ။ လက်မောင်းကို ကွေးချီဆန့်ချီ လုပ်ပြဒေါ့ နည်းတဲ့ဗလမဟုတ်၊ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ ကောင်းကောင်း ထိုးတတ်ပုံရဒယ်။ ပြီးတော့မှ “ငါ့ပါးတခါရိုက် နင့်ပါးဆယ်ခါချ.. အာမင် ” မျက်ထောင့်နီဂျီးနဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။
သူ့ဘဲ မြင်ဖူးချင်ရင် တရုတ်တန်းသာ သွားကြည့်ဗေဒေါ့.. ဆိုင်အဝမှာ မလှုပ်မရှက် တွဲလောင်းဂျီး.. အဲဒါ သူ့ဘဲ ဆိုပဲ.. အဟတ် အဟက်..။ အရိုးများသလေး ချေးခါးသလေးတော့ မလုပ်နဲ့.. ခုတ်ခိုင်းရင် tip မန်းနီးပေးမှာလား ဘာညာ ပြောလိမ့်မယ်။ မသိခြင်ထောင် ထောင်ပြီး အသာယူလာခဲ့။ ဘဲကင်ဖိုးကို ခရက်ဒစ်ကတ် လက်မခံ… ငွေသားကက်ရ်ှပဲ တောင်းပြီး အခွန် ဖြတ်အုပ်ပြီးသား..။ ဂျီးဒေါ်ရှီးတို့က မပိုင်ရင် ခြင်တောင် အရိုက်ဖူး။ နာမည် တလုံးနဲ့နေဒါ.. ဘာမှတ်သတုံး.. ဒချိ ဒချိ ဒချိ…။
အာမင်… အဲလေ… သာဓု
နာ့ ဒို့ ယောင်းမလေးဂို သွားစ နေဒယ်။
သူ့ ဘဲ ရဲ့ ဗလကို မကြောက်ဖူးလားမသိ။
ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ဒလစပ် ၀လာအူးမှာပဲ …
စားချင်တာ စားအူးမှာတဲ့ …
ဖုန်းမလာနဲ့ မုန်းမှာ တဲ့ …
အော်. . .ဒုက္ခ. .အူးလေးကြောင်ရယ်. .စိတ်တွေလဲအတော်ပင်ပန်းသွားပြီးထင်တယ်. . .ဒေါ်ရှီးတို့ကလဲတက်နိုင်ရင် အီသီယိုပီးယားနိုင်ဂံတောင် အိမ်နားခေါ်ထားချင်တာ. .မတက်နိုင်တော့တက်နိုင်တာလေးပဲလုပ်ရတာပေါ့. . ..ခုကြည့်ကိုယ်တောင်ဆရာတွေကဖိတ်ကျွေးလို့ဧည့်သည်တွေနဲ့သွားစားတာ. .ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆိုလဲဝယ်မစားနိုင်ဖူးရယ်. .ပုဇွန်ထုပ်ကတော့ ကြိုက်တာကတော့အသေပဲ. .အဲ့. .ပေါ်တာပြန်လို အလာကားရရေတောင်သွားကျိုးအောင်သောက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်. .တစ်မျိုးနည်း၂ဆီပဲပွဲတည်ခဲ့တယ်ကွယ်. .
ဒေါ်ဂျီးရှီးကိုတော့ ဦးကြောင် စ ပြန်ပြီ။
…အင်း..ထမင်းဘွဲဂျီးကဒေါ့ သေ၇ကျဂျင်ဇယာဂျီးဘဲ… :harr:
…ဒါပေမဲ့..“ဆန်ကွဲမှုန့်နဲ့ လမ်းဘေးအရွက်စုံ ကြိုထားတဲ့ တာလဗောဟင်း”၊ပဲစားဘာဒေါ့မယ်လေ
မယ်ဂိ့ရေ ဟေးမယ်ဂိ ဒမယ်သမနေဘီ ငိငိငိ ပြေးဘီ
ဟီဟိ…. ကျော် … လှဒယ်မလား ..စကားမစပ်…
ဒချိ ဒချိ ဒချိ